Ogaden News Agency (ONA) – Dhibaato Lasoo Daristay Shacabka Ghouta ee Suuriya.
Dhibaato Lasoo Daristay Shacabka Ghouta ee Suuriya.
Posted by ONA Admin	/ March 12, 2018
Guddiga caalamiga ah ee laanqayrta cas (ICRC) ayaa waxay sheegeen in dadka ku nool magaaladda Douma ee Bariga Ghouta ay xaalad xun ku sugan yihiin wakhtigan xaadirka ah degaalka halkaas ka socda awgii.
Arrintan ayaa waxay guddigu sheegeen in ay ka dhalatay dowladda Suuriya oo sii xoojisay duqaymaha ay halkaasi ka wado. Afhayeenka guddiga caalamiga ah ee ICRC, Ingy Sedky, ayaa sheegtay in dadka ku sugan magaalada Douma aysan dan ka lahayn gargaar soo gaadha.
Waxa ay intaa ku dartay in dadka goobtaasi ku sugan waxa ay ka walaacsan yihiin ay tahay sidii ay u sii noolaan lahaayeen oo aysan dagaalada ugu dhiman lahayn. Magaalada Douma ayaa ka go’an goobaha kale ee Bariga Ghouta ee dagaalada ay ka socdaan.
Guddiga caalamiga ah ee ICRC ayaa saxaafada u sheegay in kolanyadii gargaarka ay ka soo laabteen magaalada Douma xilli uu halkaasi dagaal ka socdo. Kooxaha la socodka xaaladda Suuriya ayaa waxa ay sheegeen in ka badan 1000 qof oo rayid ah ay dhinteen tan iyo intii ay dowlada billaawday howlgalada bariga Ghouta .